Inkxaso yeVidiyo kwi-imeyile iyakhula- kwaye iyasebenza | Martech Zone
Ngophando olunzulu olunzulu, iimonki ziphinde zeza nolunye ulwazi olunomdla Imeyile yeVidiyo . Le infographic ibonelela ngezibalo ezixabisekileyo zokuba kutheni ukusebenzisa ividiyo kwi-imeyile kubalulekile, iindlela ezilungileyo zokubandakanya ividiyo kwi-imeyile kunye nezinye iintsomi ezinxulumene nokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile.
Le infographic iya kukuhamba ngokubaluleka kokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile, iintlobo ezahlukeneyo ze-imeyile yevidiyo, iintsomi ezinxulunyaniswa nokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile njl.njl. Imeyile kwi-Acid nedatha yeeMonks ze-imeyile kunye novavanyo, ubuncinci I-58% yabo bonke abasebenzisi iya kuba nakho ukubona ividiyo kwi-imeyile. I-42% yabo bonke abasebenzisi iya kuba ibona umfanekiso obuyela umva endaweni yevidiyo. I-55% yabathengisi ngoku banokusebenzisa ividiyo kwi-imeyile. I-infographic iya kuphakamisa ezinye zeendlela ezilungileyo zeshishini lokubandakanya ividiyo kwi-imeyile.
tags: i-imeyile infographicukuthengisa nge-imeyile infographiciimonki ze-imeyileimeyile kwi-asidiividiyo ye-imeyileimeyile yevidiyoividiyo kwi-imeyileinkxaso yevidiyo